Traduci and i am thy little pearl ! da IngleseaBirmano
Hai cercato la traduzione di and i am thy little pearl ! da IngleseaBirmano
သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ် ကျရှုံးခဲ့ပါသည်။
Ultimo aggiornamento 2012-05-20
ယောက်ျားကလည်း၊ ကျွန်ုပ်ကားအာဗြဟံ၏ ကျွန်ဖြစ်ပါ၏။
I am supporting STOP 114A.
၁⁠၁၄(က)ကို ရပ်ဖို့ ကျွန်မကတော့ ထောက်ခံတယ်၊
ကိုယ်တော်ကို ထိတ်လန့်သဖြင့်၊ အကျွန်ုပ်သည် ကြက်သီးမွေးညှင်းထ၍၊ စီရင်တော်မူချက်တို့မှာ ကြောက် ပါ၏။
I am fighting bites with bytes!
ကိုက်တာတွေကို ဘိုက်(byte)တွေနဲ့ ချနေပါတယ်။
I am lying on Rail Line.
သင်၏သူငယ်တို့ကိုကိုင်ယူ၍၊ ကျောက်ပေါ်မှာ ဆောင့်သော သူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။
ပေးတော်မူသော ဩဝါဒများကို အကျွန်ုပ်ရှာဖွေ မေးမြန်းသည်ဖြစ်၍၊ အဆီးအတားမရှိဘဲ သွားလာရ ပါ၏။
ဧလိယက ငါမှန်၏။ ဧလိယသည် ဤမည်သောအရပ်၌ရှိပါ၏ဟု သင့်သခင်ထံသို့သွား၍ လျှောက်လော့ ဟု ပြောဆိုသော်၊
I am disgusted at reading this.
ယခုမူကား၊ ငါသည်သူတို့သီချင်းဆိုရာ၊ ကဲ့ရဲ့ပုံ ခိုင်းရာ ဖြစ်ပါသည်တကား။
ဂိလဒ်မြို့ကိုကား၊ မာခိရအမျိုးသားတို့အား ငါပေး၏။
မိုဃ်းသောက်ကြယ်ကိုလည်း ထိုသူအား ငါပေးမည်။
berikai fruit (Tamil>Inglese)nakakainis ka, (Tagalog>Inglese)sortez de la maniere (Francese>Inglese)apakah maksud i'maflattered (Inglese>Malese)svaka cast (Serbo>Inglese)nga mihi nui (Maori>Inglese)hindi kakayanin (Tagalog>Inglese)navigareavista (Italiano>Inglese)persatuan kemahiran hidup (Malese>Inglese)sup bunjut (Malese>Inglese)thaiföldről (Svedese>Inglese)فتح بنات صغار سكس (Arabo>Inglese)لع (Arabo>Inglese)plasma actuators (Inglese>Malese)how much time will it take (Spagnolo>Inglese)kasingkahulugan ng nakatuon (Tagalog>Inglese)apakah maksud disposable (Inglese>Malese)ñuka kanta kuyani (Quechua>Spagnolo)tu eres mi hermano del alma (Spagnolo>Inglese)harbatera (Inglese>Tagalog)tradentur (Latino>Inglese)mai tumhara wait karunga (Hindi (indiano)>Inglese)i am all yours (Inglese>Latino)கிளி பறவை பெயர் (Tamil>Inglese)surat pengesahanehakmilik jpj fis (Malese>Inglese)